Umzukulu ohlonelwe kakhulu waseRashiya ubonisa ishishini elitshatileyo kwiveki edlulileyo. Emtshatweni kaNikita Presnyakov kunye ne-Alena Krasnova iindwendwe ezazidibeneyo, phakathi kwazo kwakukho amagama amaninzi awakhanyiswa rhoqo kwiindaba zakutshanje.
Uzalwe kwintsapho eyaziwayo kakhulu yaseRussia, uNicita akakwazanga nayiphi na indlela inomdla wokondla uluntu kumntu wakhe. Kwaye umculi omncinci wayenzima kunokuba zonke izihlobo ezidumileyo zihlanganiswe, kuba kufuneka adibane negama elikhulu lika-ugogo uAlla, kunye nozuko lukayise, kunye nokuthandwa nguyise.
Ukususela kutshanje, umthwalo onzima wozuko lweentsapho ezidumileyo zabelwana kunye noNicita umkakhe uAlena.
Kwaye ekubeni incinci iyaziwa ngomfazi womfana, abasebenzisi be-intanethi bafuna nayiphi na inkcazelo malunga nentombazana kunye nobomi bomtshato kunye kunye.
U-Alena Krasnova utshele ukuba uNicita Presnyakov wenza ntoni ekhaya
Zingaphi izibini zawa phantsi ngenxa yokungaqondani kwindlu. Ukuze ugweme ukutshatyalaliswa kwentsapho, isibini esitshatileyo uPsakoakovs sele sidlulisele imisebenzi yabo yasendlini. Nangona esemncinci, u-Alena Krasnova uqikelele ngokugqithiseleyo ukuba indoda yokudala ayifanele ilayishwe imisebenzi yendlu, ngoko ulawulo lwawuthatha. Intombazana enomdla ilungiselela ukucoca ngokubanzi nomhlobo osondeleyo:
Ndiphuma kwindlu xa intombi ifika kundibona, sinokuzihlela ngokubanzi kunye, kwaye siya kwenza zonke iiyure ezingama-6 ngokulandelana, de kube kusasa! U-Nikita ungumntu odala, usebenza, ngoko andiyilayishi.
Umthwalo kuphela kaNicita ukuhlamba izitya. Enyanisweni, ngokutsho komfazi omncinci womculi, isizathu salolu luthando olungavamile lomyeni wakhe kumacwecwe angcolileyo kukukho kwendawo yokuhlambalaza:
... konke kum, kodwa kuNikita kuphela izitya! Ndandingayifumana nayo, kodwa into endithanda ngayo, kubonakala kum, ndiyathanda ukubeka i-dishwashher ngokwayo.
Yaye njani kwintsapho yakho ishicilelwe? Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
UVera Brezhnev wabhenela umona
U-Ivan Okhlobystin nomkakhe balindele umntwana wesixhenxe
U-Irina Meladze utshilo indlela asinda ngayo ukutshatyalaliswa komyeni wakhe
Kuphi iimoto eziya kuBuzova, Borodina kunye nabanye abathathi-nxaxheba be-teleproject "Dom-2"
U-Nikolai Baskov ulungele ukusebenza ngaphandle kwentlawulo emva kwehlazo "ngomtshato wegolide"
UKsenia Sobchak washiya ummiselo kwiintsuku ezili-10, ifoto
Isivivinyo esingu-5. Vladimir Kristovsky amaphupha enyana wakhe
Iintlobo zempilo kunye nenjongo yazo
NgoJanuwari 7 IKrismesi: ukuvumisa ngoKhisimusi ngo-2015
Ukugoba okutshatiweyo kweenwele
Ukungabi nesinyithi emzimbeni wesifazane okhulelweyo
Indlela yokujonga i-sexy?
Unokukunceda njani imilenze ekhalile
Amanyathelo okulungisa abantu
Iipropati eziwusizo zeerill
Omelette soufflé kunye noshizi
Ubundlobongela ngomhla wokuQala: Iinkonzo kunye neNgqungquthela
Indlela yokukhenkcela iibhauble kunye nomfanekiso
Imibala yokugqamisa iinwele ezimnyama
Iingxowa zeenkukhu zibhaka kwi-pastry